Dia nankany amin'ny tendrombohitra Ural | Vaovao momba ny dia
Dia nankany amin'ny Tendrombohitra Ural
Mariela Carril | | Inona no ho hita, Rosia
To the Tendrombohitra Ural izy ireo no heverina ho sisintany voajanahary eo anelanelan'ny Eoropa sy Azia. Tendrombohitra mahafinaritra izy ireo izay manodidina ny 2500 kilometatra ary an'i Russia sy Kazakhstan. Ny tany dia manafina harena sarobidy ho an'ny tontolo maoderina toy ny arintany, solika na vy, noho izany ny faritra iray manontolo dia tena manandanja indrindra ho an'ny firenena roa tonta.
Ny teboka avo indrindra amin'ny Ural dia ny Mount Narodnaya izay mahatratra 1895 metatra ny haavony. Eny, tsy tandavan-tendrombohitra misy tendrony avo dia avo izy, saingy avo lenta izy io ka miavaka eo an-tany lemaka, eo an-daniny iray, dia manitatra manodidina azy. Androany isika dia hianatra bebe kokoa momba ny Tendrombohitra Ural sy ny azy ireo tolotra fizahan-tany.
1 Ireo Tendrombohitra Ural
2 Fizahan-tany any amin'ny Tendrombohitra Ural
Ireo Tendrombohitra Ural
Ireo havoana manomboka amin'ny ranomasina kara izy ireo, ampahany amin'ny Ranomasimbe Arctic Glacial, avaratry Siberia, mankamin'ny tohatra kazakh, faritra malalaka eny avaratry Kazakhstan ary ampahany amin'i Russia. Misy nosy roa any avaratra izay ampahan'ny tendrombohitra, misy ny fanitarana azy: New Zembla Island ary Vaygach Island.
Araka ny noteneninay, ny tampon'ny tampon'ny tendrombohitra Narodnaya dia 1895 metatra, miaraka amin'ny glaciers sasany eo an-tampony. Ireo Tendrombohitra Ural dia mizara ho sehatra dimy: Ny Arctic Urals, tsara ny avaratra, ny Ural any ambanin'ny tany, aiza ny Narodnaya; ny Ural Avaratra, rojo mirazotra; ny Ural afovoany, ambany, ary Ural atsimo, miaraka amin'ny lohasaha.
Ny Tendrombohitra Ural dia misy lava-bato, vato maranitra, renirano maro ... Ny endrik'izy ireo dia miovaova arakaraka ny haavony sy ny halavan'ny tany, noho izany dia be ny steppe nefa koa misy ala. Raha ny momba ny fiana-biby dia fonenan'ny Ural lynx, squirrels, martens, amboahaolo, amboadia, bera, badger, grouse, marmot, vorondolo, partridges, pheasants, reindeer ....
Ny Ural izy ireo dia iray amin'ireo tandavan-tendrombohitra tranainy indrindra manerantany ary raha ny filazan'ny geolojika dia 250 hatramin'ny 300 tapitrisa taona lasa izay no niforonan'izy ireo rehefa nifandona tamin'ny kaontinanta Kazakhstan izay vao haingana sy malemy kokoa i Euroamerica. Tombanan'izy ireo fa 90 tapitrisa taona mahery no nitrangan'ilay fianjerana.
Fizahan-tany any amin'ny Tendrombohitra Ural
Mahatalanjona ny manao ny velaran-tanànan'ny tendrombohitra Ural fizahan-tany any ivelany. Misy masoivoho fizahan-tany maro eo amin'ny lafiny Rosiana, ao amin'ny Faritany Perm, izay afaka mandamina fitsangatsanganana miaraka amin'ny fitaovana sy fitaterana rehetra ilaina Ny tolotra fitsangantsanganana dia samy hafa: misy ny mitaingina renirano, ny dia an-tongotra lavitra, ny ski an-tsambo, ny mitaingin-tsoavaly ary ny jono sy ny fihazana. Perm dia ivon-indostrialy lehibe dia lehibe, natsangana tamin'ny 1723.
ny mandeha renirano Any catamaran izy ireo ho an'ny olona efatra ary mamela anao hankafy ny hakanton'ny tendrombohitra avy amin'ny rano, mankafy tsara ny natiora, mahita tanàna sy ala tsy manam-petra. Perm dia manana renirano 40 farafahakeliny mety amin'ny karazana dian-tongotra ireo, fa anisan'ireo malaza indrindra ny reniranon'i Koiva sy ny Vishera.
Amin'ny fotoana anaovana trekkineg any Russia dia mila jerena fa mitaky izany. Lava ny halavirana, misy natiora tsy voakitika be dia be, tsara tarehy be, izay miova indraindray ny andro ao anatin'ny iray andro. Ny toerana tsara indrindra amin'ny dia an-tongotra dia ny Valan-javaboary Basegi, 200 kilometatra miala an'i Perm, misy tendrombohitra telo sy faritra marobe ary ny Tahirizam-panjakana Vishersky. Amin'ny toerana roa dia ny fitsangatsanganana amin'ny andro farany.
Ho an'ny dian'ny mitety ny lafivalon'ny firenena tadidio fa ny ririnina eto dia tena sarotra. Frozen. Ny fitsangatsanganana dia afaka maharitra efatra andro ka hatramin'ny folo, raha ao anatin'izany i Moskoa. Matetika koa izy ireo dia mampiditra ny sisintany manelanelana an'i Eropa sy Azia, ny Mount Toplaya Gorany antso Vavahadin'i Tsar karst rock, ny renirano Koiva, ny Zohy Chudesnitsa, ny riandrano mangatsiaka ao Khrustalny… Faritra iraisampirenena malaza iray hafa dia ny faritra Krasnovishersky, 300 kilometatra miala an'i Perm.
Akaiky kokoa an'i Perm, ny toby fiasan'ny Rosiana, azontsika lazaina, any an-dafin'ny Ony Kama, no kely Vohitra Nizhnaya Kurya ary ity misy fiompiana soavaly mandamina mitaingina soavaly. Misy biby 30 samy hafa habe sy karazany ary pass miaraka amin'ny mpitari-dalana atolotra ho an'ny mpizahatany mahay mitaingina na tsia. Misy làlana maromaro aza ho an'ny olona za-draharaha.
Eo amin'ny lafiny jono sy fihazana Perm dia iray amin'ny toerana tsara indrindra any amin'ny ilan'ny Eropa any Russia. Betsaka ny toerana fihazana izay manolotra ny mety hihaza biby isan-karazany (amboadia, amboadia, lynxes). Ny fotodrafitrasa koa dia mety ho ambony indrindra. Toy izany ihany koa amin'ny resaka jono satria ny faritany dia manana renirano sy renirano betsaka indrindra any Rosia ary afaka manjono ianao manomboka amin'ny trout mankany amin'ny karpa. Ny safidy mora indrindra amin'ny jono dia ny reniranon'i Kama, manomboka ny volana jona ka hatramin'ny oktobra.
Ary farany, ny masoivohom-pizahan-tany Perm dia manolo-tena hiaina izany dacha traikefa, ilay trano fahavaratra mahazatra Rosiana. Ny vanim-potoana Dacha dia manomboka amin'ny Mey ka hatramin'ny Septambra ary matetika izy ireo dia mahazaka olona efatra. Ny fijanonana roa andro sy iray alina any amin'ny dacha dia mety misy ny sambo, manjono, mitsimpona holatra any anaty ala, milentika masoandro, milomano. Izany rehetra izany no atolotry ny fizahan-tany any Perm, saingy mazava ho azy fa tsy io irery no tanjona any amin'ny Tendrombohitra Ural.
Inona avy ireo toerana hafa any amin'ny Tendrombohitra Ural? Azonao atao ny mitsidika ny tanànan'i Yekaterinburg, miaraka amina olona iray tapitrisa sy sasany, dia mpizahatany ihany hatramin'ny taona 90. Io no tanàna rosiana lehibe indrindra any Azia ary voahodidin'ny ala. Ny tapany indostrialy dia eo amin'ny sisiny ivelany ka ny tanàna mihitsy no manana endrika madiodio kokoa, miaraka amin'ireo làlana malalaka voaravaka hazo sy tranobe. Ity ny fiangonana tsara an'ny ran'ny olomasina rehetra, miaraka amin'ny dome volamena izay mijoro eo Tsar Nicholas II sy ny vadiny Alejandra dia novonoina niaraka tamin'ny zanany dimy.
Ny trano mimanda an'ny Chelyabinks Tamin'ny 1736 izy io ary niteraka ny tanàna mitovy anarana aminy, ary misy mponina iray tapitrisa mahery koa. Any atsimon'ny Ural izy io ary manana tranombakoka kanto mahaliana vitsivitsy. Orenburg Ivon-indostrialy kely kokoa izy io, nanomboka tamin'ny 1735. Manana tranombakoka maromaro ihany koa izy io ary amin'ny manodidina azy dia afaka mihaza ianao, mandeha manjono na mitsidika lava-bato, toeram-pitrandrahana ary toeram-pitrandrahana.
Ny marina izany ny Tendrombohitra Ural dia toerana tsara hiainana natiora eo am-piandohana tanteraka, koa raha tianao ny mamakivaky ala, mijery ny kintana, mijanona manoloana ny farihy goavambe ary mahatsapa fa izao tontolo izao no toerana tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao, miandry anao ny Tendrombohitra Ural.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Inona no ho hita » Dia nankany amin'ny Tendrombohitra Ural
Castle an'i Wewelsburg